Ka Dhigista Shakhsiyeyn Ahmiyad Leh | Martech Zone
Arbacada, Juun 11, 2014 Arbacada, Juun 11, 2014 Douglas Karr
Toddobaadkan Cidhifka shabakadda Bandhigga raadiyaha iyo Podcast, waxaan ka hadlaynaa ganacsiga qadka tooska ah iyo tillaabooyinka ay tahay inay qaadaan shirkadaha si loo horumariyo iibkooda internetka. Xogta ugu dambeysay ee aan wadaagnay, Xogta Doorka Jidka Tooska ah ee Iibsiga, waxaa jiray wax yar oo ka mid ah shaqsiyaadka la sheegayo iyo sida ay u kordhayso furitaanka, qasabno iyo beddelaad ka timid ololeyaal emayl. Laakiin maaha inay ku ekaato farriinta emaylkaaga, shaqsiyeynta waa in lagu wareejiyaa dhammaan khibradaada macaamiisha khadka tooska ah.
Shakhsiyeyn shakhsi ahaaneed maahan xeelad lagu tijaabiyo oo keliya, waa xilli istiraatiijiyad la caddeeyey oo lagu jiro iyo waqtiga ka baxsan kordhinta iibka. Xogtan macluumaadka ah ee ka socota Sq1, oo ah hay'ad ku takhasustay hagaajinta beddelaadda, waxay ku saleysan tahay warqad cad oo ay soo saareen oo la yiraahdo Ka Dhigista Shakhsiyeyn Mudnaanta Koowaad.
Adoo ka faa'iideysanaya talooyinka wax soo saarka si loo wado fursadaha iskutallaabta iyo kor u qaadista iyo u habeynta dalabyada / farriimaha ku saleysan xogta taariikhiga ah ee macaamiisha, suuqleyda ayaa awood u leh inay dhisaan buundooyin ka wanaagsan macaamiisha. Waxay awoodaan inay sare u qaadaan tirada alaabada la iibiyey ayna kobciyaan daacadnimada muddada-dheer. Caddayntu waxay ku jirtaa lambarrada. Ku dhowaad 60% suuqleyda ayaa la kulmay ROI kordhay markii ay shakhsiyeeyeen dukaankooda internetka.
Waa inaad shakhsiyeeysid meel kasta oo aad kari karto oo ay ka mid yihiin:
E-mayllada ka-noqoshada e-mayl wadista bartaada
Emailada macaamilada ee bixiya alaabooyin dhammaystiran oo ay weheliso kuuboon dhiirrigelin ah iyada oo loo marayo emayl xaqiijin ah
Shakhsiyeyn shakhsi ahaaneed waa inay saameyn ku yeelataa xulashooyinkaaga hagista, bogagga degista iyo gaari-ka-dukaameysiga websaydhkaaga
Abuur bogag soo degitaan oo loogu talagalay dallacsiinta oo ku soo celi macaamiisha galitaanka
Liisaska Rabitaanka; u fududee macaamiisha inay si dhakhso leh ugu noqdaan alaabooyinka ay xiiseynayaan
Tags: xaqiijinta emaylkadiintaHagaajinta beddelkacouponkhibrada macmiilkasoo bandhig xayeysiiskaboggaga soo degayaqiimaha noloshanavigationemayllada xulashadashakhsi ahaaneedkuuboon xayeysiis ahdallacaadahaku celi macaamiishaku celi iibsigaGawaarida wax iibsigasq1emayl macaamilemaylka macaamilkaliisaska rabitaanka